काठमाडौकाे कलंकीमा भर्खरै घट्याे यस्ताे दु:खद घटना ! – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौकाे कलंकीमा भर्खरै घट्याे यस्ताे दु:खद घटना !
काठमाडौकाे कलंकीमा भर्खरै घट्याे यस्ताे दु:खद घटना !
admin February 14, 2022 समाचार Leaveacomment 99 Views
बसले ठ`क्कर दिँदा कलंकीमा एक ट्राफिक घा-इते भएका छन् । आरएनएसीबाट मच्छेगाउँ जाँदै गरेको बा ४ ख १२३३ नम्बरको बसले डिउटीमै रहेका ट्राफिक राजेन्द्र कुवरलाई ठक्कर दिएको हो । ठ`क्करबाट घा`इते ट्राफिकको टा`उकोमा चाे* `ट लागेको बसमा सवार आरआर क्याम्पसका विद्यार्थी नेता सुसिल खनालले जानकारी दिएका छन् ।
Previous शरीरको सेता धर्साका कारण लज्जित हुनुभएको छ ? यी घरेलु उपायबाट पार्नुहोस् गाएब